Iyo UBPorts projekiti inotangisa yayo yekutanga kugadziridza kwemafoni neUbuntu Runhare | Linux Vakapindwa muropa
Iyo UBPorts purojekiti inotangisa yayo yekutanga kugadziridza kwemaoko ane Ubuntu Runhare
Munguva pfupi yapfuura timu ye UBPorts yakaburitsa vhezheni itsva yeUbuntu Runhare, iyo mobile system iyo Ubuntu yakasiya. Iyi vhezheni nyowani haingogadzirise chete mashandiro ehurongwa asi zvakare inovandudza zvakanyanya nharembozha neiyi sisitimu inoshanda, ichivapa maturusi akakumbirwa nevashandisi vazhinji veGnu / Linux kubva kuUbuntu kune yavo mobiles uye mapiritsi.
Iyo vhezheni itsva inonzi OTA-1, uchitevera zita reCanonical asi uchitangazve iyo yekuvandudza vhezheni kuverenga. Uye chinoshamisa ndechekuti OTA-1 iyi ichawanikwa pamidziyo yese kunze kweiyo Nexus 4 ne5 inofanirwa kumirira kuti ivandudzwe.
Chikwata cheUBPorts hachina kungoburitsa ichi chigadziriso kune ese epamutemo Ubuntu Foni zvishandiso asi chaita diki "hombe" kugadzirisa. Pakati peidzi shanduko kubatanidzwa kwe OpenStore, chitoro chemahara kwatinogona kurodha maapplication eedu smartphone.
Iyo yekuyedza AGPS system yakaverengerwa inozotsiva yapfuura, ichigonesa kusvika kweiri nani geolocation system. Iyo yekutambira skrini yakagadziridzwa zvakare kuva chimwe chinhu chakafanana neMATE Wakagamuchirwa kana Linux Mint Welcome pane iyo Android skrini. Uye pakupedzisira, mushandisi achave nazvo kubva pazuva rekutanga chinouraya uye maneja wefairaZvishandiso zvinonyanya kubatsira kune vedu vedu vari vashandisi veGnu / Linux uye iyo Ubuntu Runhare yaive asi yakaremara nekutadza.
Vagadziri veUBPorts vari kushandawo pachirongwa cheHalium, chirongwa icho chine chinangwa chekubatanidza ese masisitimu anoshanda kana zvirinani zvine chekuita nemaapps avo. Uye zvinoita sekunge munguva pfupi yapfuura mafoni ekare ane Ubuntu Runhare anozokwanisa kumhanyisa maapplication eApple. Chero zvazvingaitika, izvi zvisati zvauya, tinofanira kugamuchira OTA-1 yeNexus 4 neNexus 5, chinova chinhu chiri padhuze kana pamwe kwete?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo UBPorts purojekiti inotangisa yayo yekutanga kugadziridza kwemaoko ane Ubuntu Runhare
Maitiro ekuvandudza iyo BQ Aquaris M10 HD Ubuntu Edition OTA 15 piritsi kune iyo nyowani vhezheni UBPorts OTA 1?
Ini ndatsvaga uye handina kuwana maitiro ekuvandudza.
OpenExpo 2017 yakapfuura fungidziro dzese